legioma 5 hambolena amin'ny volana Mey ao amin'ny zaridainanao | Bezzia
Maria vazquez | 03/05/2022 12:00 | an-trano
Sahy namorona a zaridaina an-tanàn-dehibe amin'ny terrasinao manaraka ny torohevitsika? manana anao nanomana sombin-tany ao an-jaridaina mba hamboly zavamaniry sasany? Raha eny, fotoana izao manomboka mamboly ary jereo ny zava-maniry sasany maniry toy ireny anana ambolena ireny amin'ny volana mey izay arosontsika anio.
Tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana? ny legioma dimy Ireo izay resahintsika androany dia safidy tsara ho an'ny vao manomboka. Izy ireo dia hampiala voly anao ary hamela anao hitondra sakafo vaovao eo ambony latabatra tsy mila miantsena.
Ny loza lehibe indrindra ho an'ny ankamaroan'ireo zavamaniry ireo dia ny fanala, ka izany no ilaina miandry ny volana Mey vao mamboly azy ireo. Ankoatr'izay, tsy mety ny latsaka ambanin'ny 10 degre ny mari-pana ambany indrindra raha tiantsika ny hivoatra tsara. Ary izany, fara faharatsiny, eto avaratra, dia mbola tsy nitranga hatramin'izao.
4 Voatabia Cherry
Ho an'ireo aubergine tian'izy ireo ny hafanana izany no mahatonga azy ireo hitombo mandritra ny fahavaratra. Ary mitaky ny ora mazava ilainy mba hivoatra araka ny tokony ho izy, eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora isan'andro, noho izany dia mila misafidy toerana misy masoandro ao amin'ny zaridaina na terrace ho azy ireo ianao.
Tiany tany lonaka, manankarena humus ary tsara fluffy. Ao anaty vilany iray dia tsy ilaina ny mametraka zavamaniry mihoatra ny iray, satria mitaky zavatra mahavelona izy ireo. Ho fanampin'izany dia mety tsara ny manohana ny taho lehibe sy mamatotra ny sampana lateral rehefa mitombo sy mihamitombo ny zavamaniry.
Mitaky fanondrahana matetika sy be dia be izy ireo, fa tandremo sao tondraka ny fakany! baranjely mampivelatra faka lalina Noho izany, ny tany tanimanga, tsy misy drainage tsara, dia mety hanempotra ny fakany sy hanimba ny vokatra.
Ny courgettes dia azo afafy mivantana amin'ny tany efa voaomana tsara any ivelany na ao anaty fitoeran-javatra (farafahakeliny 30 litatra). Mba hampandrosoana dia mila toerana be masoandro sy a hafanana eo anelanelan'ny 20ºC sy 30ºC mandritra ny andro arakaraky ny fotoanan'ny fitomboana izay ahitana azy. Andraso hatramin'ny faran'ny volana mey raha mbola tsy feno ireo fepetra ireo!
Zava-dehibe ny miaro ny tanora zavamaniry avy amin`ny sy ny sifotra sy manondraka azy tsy tapaka. Ny courgettes koa dia voly noana: rehefa manomboka mamony dia mila zezika matetika. Ny fijinjana dia matetika atao 90 andro aorian'ny fambolena, raha mbola tsy masaka tanteraka ny voankazo.
Ny salady dia iray amin'ireo legioma mora indrindra ambolena. Azo afafy mandritra ny taona manontolo amin'ny toetr'andro mafana izy io, fa amin'ny toetr'andro mangatsiaka dia tsy maintsy miandry mandra-pahatapitry ny fanala. Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny famafazana letisia dia ny famafazana ny voa ao anaty famafazana. Tsy hihoatra ny herinandro vao manomboka mitsimoka ny zana-kazo, izay efa vonona hafindra raha vao misy raviny faharoa.
Ilaina ny mamboly azy ireo amin'ny tany lonaka tsara eo amin'ny 25 santimetatra eo anelanelan'izy ireo ary manondraka azy moramora matetika mba hampamandoana kely ny tany amin'ny fotoana rehetra. Raha ny toerana, dia tokony ho amin`ny toerana somary mangatsiaka, izay misoroka ny masoandro amin`ny antoandro.
Mila masoandro sy hafanana ny voatabia serizy mba ho masaka ny voany, ka izany no matetika ambolena amin'ny faran'ny lohataona. Ny mari-pana dia tsy tokony hidina ambanin'ny 10ºC ary izany mety amin'ny 20ºC mba hivoatra tsara ny zana-kazo. Raha ny fanondrahana dia tsy maintsy atao tsy tapaka, misoroka ny fanondrahana ny zavamaniry mba hisorohana ny holatra.
Ianao dia mila a 16 litatra mamboly voatabia serizy raha tsy afaka mamboly azy amin'ny tany ianao. Miankina amin'ny karazana sy ny haavon'ny zavamaniry, mila fanohanana izay ahafahanao mamatotra ny zavamaniry ihany koa ianao; tsatòka hazo na tranom-borona voatabia dia safidy tsara.
Ny karaoty dia tsara raha maniry avy amin'ny voa, na dia haingana kokoa aza ny fitomboan'ny zana-ketsa. Afaka mitombo koa izy ireo na anaty tany na vilany miaraka amin'ny vokatra tsara, na dia mitaky fitoeran-javatra farafahakeliny 35 santimetatra aza izy ireo mba hahafahan'ny fakany mivoatra tsara.
Tian'izy ireo ny mahazo masoandro mandritra ny tontolo andro ary koa ny tany tanimanga, aerated tsara ary manankarena humus. Tsy maintsy ho izany mando kely foanaAry koa, raha tianao izy ireo handeha tsara. Ao anatin'ny telo volana eo ho eo aorian'ny famafazana dia hanomboka ho vonona hojinjaina ny karaoty.
Iza amin'ireo legioma hambolena amin'ny volana Mey ireo no tianao hankafizinao ao an-jaridainao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Legioma 5 hambolena amin'ny volana Mey ao an-jaridainao
Sarimihetsika tonga ao amin'ny Netflix amin'ity volana Mey ity